မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: ပြည်ပရောက်မြန်မာ အလုပ်သမားများအတွက် ရာနှုံးပြည့် အခွန်လျှော့ပေါ့ခြင်းအားကြိုဆို
ပြည်ပရောက်မြန်မာ အလုပ်သမားများအတွက် ရာနှုံးပြည့် အခွန်လျှော့ပေါ့ခြင်းအားကြိုဆို
ကျွန်ုပ်တို.ပါတီမှ ပြည်ပရောက်မြန်မာ အလုပ်သမားများ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုးပမ်း မှုများရှိခဲ့ပါသည်။ သဘောတူသူများရှိသလို ကန်.ကွက်သူများလည်းရှိခဲ့၏။ အားလုံးအား ကျွန်ုပ်တို. မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ယခုတော့ ကျွန်ုပ်တို.၏ ကြိုးပမ်းမှု တစ်ခု အောင်မြင်ခဲ့ပြီ။ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရမင်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ၏။
နိုင်ငံရေး (သို.) ဒီမိုကရေစီရေးကြိုပမ်းမှုဆိုသည်မှာ ပြည်သူအတွက် တစ်စုံတစ်ရာဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခြင်း ကိုဆိုလိုပါသည်။ အခြားသော အနက်များလည်းများစွာရှိပါသေး၏။ မည်သို.ပင်ဖြစ်စေ ပြည်သူ၏ ထောက်ခံ မှုမပါပဲတော့ ကျွန်ုပ်တို. ဘာမျှမလုပ်နိုင်ပါ။
ပြည်သူများ ၏ထောက်ခံမှုအား ကြိုဆိုခြင်းနှင့်အတူ ဝေဖန်ထောက်ပြမှု များကိုလည်း အထူးအလိုရှိနေပါသည်။
ဇူလိုင်လ ၃၁- ၂၀၁၀ ရက်စွဲဖြင့်ထုပ်ပြန်ခဲ့သောပါတီကြေငြာချက်
ပြည်သူများမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုစာမျက်နှာ တွင် သဘောထားများပေးပို့ခြင်း၊ အီးမေးဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ ရန်ကုန်ရှိကျွန်ုပ် တို၏ပါတီရုံးခန်းသိုဖြစ်စေသဘောထား များပေးပိုအားဖြည့်ခြင်း ဖြင့်ပြည်ပရောက်မြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ အရေး ပိုမိုထိ ရောက်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ် ပါသည်။ ပြည်သူများ၏ ထောက် ခံမှုနှင့် သဘောထားများ ရရှိမှသာ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ရဲဝံ့စွာ တိုက်ပွဲဝင်နိုင် မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ကျွန်ုပ်တို.၏ မူဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ ဝေဖန် မှုအားပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြထားချက်ဖြစ်ပါသည်
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:01 AM